NiB Master[Blogger Template] ~ YGNBlogger
07:04 Blogger Template, Template No comments
ခုတော့ netinfozblog မှတင်ထားတဲ့ လှလှပပ Blogger Template ကို share မယ်ဗျာ။ လုပ်တဲ့သူက Levis ဆိုတဲ့ India က ၁၅နှစ်ဆိုသူပါဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကြိုက်လို့ ပြန် share ပါတယ်။ သူ့ဟာက Pro လည်းဆန်သလို လူတိုင်းလိုချင်တဲ့ template တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းကြိုက်သလိုလှလည်းလှတယ်ဗျာ။ အောက်မှာ details လေးတွေတစ်ချက်လောက်ကြည်လိုက်ပါဦး။
Template Name NiB Master [Net Infoz Blog Master]
Template Designer Levis Raju / http://www.netinfozblog.in
Description This was Levis 's previous template. He published before on 25th Dec 2012. His friends request his template because it seems like pro. It's not converted from Wordpress. This template has3columns on this template. :)
Categories3Columns | 1 Right Sidebar | Black | White | Simple | Professional | Yellow | Blue | Grey | Author Card | Share
Shared by http://pyae-phyo.blogspot.com
အောက်မှာ Screenshot ရိုက်ပေးထားပါတယ်။ စေတနာနဲ့ပေါ့လေ။ ဖိုင်ကတော့ Password မပေးတော့ပါဘူး။ Direct ယူပေးထားမယ်။
ဒီ Templates လေးကလှပါတယ်ဗျာ။ share ပေးချင်လိုက်တာ။ အလွယ်တကူ ရအောင်ပဲ ပေးလိုက်မယ်။ အဆင်ပြေပါစေ။ Live Demo ဆိုရင် အစမ်းကြည့်လို့ရမယ်။ Download ဆိုရင် ဒီဖိုင်လေးရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ extract လုပ်ပြီး xml ဖိုင်လေးကို blogspot မှာတင်လိုက်ပါ။
^Back to top!
ကျွန်တော်မအားသေးလို့ အများကြီး မရှင်းပြနိုင်တော့တာပါ။ ကဲကဲ။ သောကြာနေ့မှာ တွေ့ကြရတာပေါ့။ သူငယ်ချင်းတို့တစ်စုံတစ်ခုရရင်ကျေနပ်ပါပြီဗျာ။
Pyae Phyo (Myanmar Tech News)